Qaboojiyaha guriga: sida loo sameeyo talaabo talaabo | Cusbooneysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | 04/05/2021 10:36 | Dib u warshadaynta
Xaqiiqdii adeegsiga qaboojiye waa wax aysan qof walba awoodin. Kaliya maaha rakibida, laakiin sidoo kale sababtoo ah isticmaalka korantada sare ee ay u baahan tahay. Si kastaba ha noqotee, dhammaanteen ma wada qabsan karno kuleylka xun ee xagaaga si aan ugu awoodno inaan guriga ku haysanno qaboojiye. Haddii aysan jirin ikhtiyaar kale, halkan waxaan ku siin doonaa xoogaa tilmaamo ah oo lagu sameeyo a qaboojiyaha guriga. Waa wax la awoodi karo oo qof walba ah mana jiro wax adag oo la sameeyo.
Haddii aad rabto inaad ogaato sida loo sameeyo qaboojiye guri, kani waa boostadaada.
1 Qaboojiyaha guriga
2 Sida loo dhiso qaboojiyaha guriga
3 Saarista qaboojiyaha
4 By wareegga
Maskaxda ku hay in qaboojiyaha dambe uusan la tartameynin qalab xirfad leh, laakiin waxay wax badan ka tareysaa qaboojinta qol yar oo guriga ku yaal. Qalabka korontada waxay isticmaalaan qadar badan oo tamar ah waxaana lagula talinayaa inaysan dhaafin heerkulka wadada 12 darajo. Kordhinta yar ee maanta ma yeelan karto marin hawo ah oo qiyaastii ah 3-4 digrii. Waa heerkul qaboojin kara qol yar ama ka yar 30 daqiiqo. Waxa kale oo wanaagsan in la xasuusnaado haddii aad leedahay qaboojiye aan loo baahnayn inaad hoos uga dhacdo 25 darajo si aad ugu raaxaysato qayb kasta oo guriga ka mid ah.
Aan aragno maxay yihiin qalabka loo baahan yahay in lagu dhiso qaboojiyaha guriga:
La kordhiyay sanduuqyada xumbada badan leh: Waa wax caag ah oo xumbaysan oo saldhig u noqon doona.
Taageere desktop oo dhexdhexaad ah. Waxay noqon kartaa mid si caadi ah u xiran oo hawo leh koronto iyo kumbuyuutar adigoo fiilooyin leh.
Laba tuubo caag ah
Batariyada ama baytariyada (haddii uusan taageere lahayn fiilo)
Cajalad dahaaran oo Mareykan ah
Sida loo dhiso qaboojiyaha guriga
Markii aan ogaano waxa ay yihiin qalabyadan, waxaan arki doonnaa waxa talaabo talaabo ah ee lagu dhisayo qaboojiyaha guriga. Ugu horreyntii waa inaad fiiro gaar ah u yeelato sanduuqa xumbada ballaadhan ee polystyrene. Waa inaad hubisaa inay tahay isla balaastiigga wasakhaysan ee ay u isticmaalaan inay u diraan kalluunka barafaysan xarumaha, tusaale ahaan. Sanduuqa waa inuu lahaadaa dabool la hagaajin karo iyo xoogaa tallaabooyin ah si ay ugu yaraan ugu dhex haysato hal bac bac dhexdhexaad ah.
Waxaad sidoo kale ka sameyn kartaa sanduuqa qaboojiyaha guriga lagu sameeyo ee sanduuqa balaastigga ah inta uu dabool leeyahay. Waxaad ku dabooli kartaa gudaha sanduuqa aluminium si aad u kordhiso saameynta dahaadhka. Talaabadani gabi ahaanba waa ikhtiyaari waxaana kaliya loo sameeyaa si loo kordhiyo waxqabadkeeda wax yar. U isticmaal cajaladda duleelka si aad ugu marto aluminiumka geesaha. Waxaa loogu talagalay inay sanduuqa ka dhigto mid dahaadh iyo biyo diidan intii suurtagal ah si saameynta qaboojiyaha gurigu ay u weynaato.
Waxaan sidoo kale isticmaali karnaa xeeb ama qaboojiye kaambeyn ah oo leh maaddooyin isaga u gaar ah si aan ugu awoodno inaan cuntada ku qaboojino muddo dheer Marka sanduuqa la hagaajiyo, waxaan u dhaqaaqi doonnaa isku xirnaanshaha marawaxadda iyo labada tuubbo caag ah. Si tan loo sameeyo, waa inaan isticmaalnaa mindi oo aan ka jarnaa daboolka sanduuqa EPS. Waxaa lagugula talinayaa in daloolka laga sameeyo hal dhinac oo daboolka ah oo aan laga dhigin dhexda iyo inuu leeyahay cabir la mid ah qafis daboolaya garbaha marawaxadaha. Waad ku hagaajin kartaa cabirka marawaxadda daloolka si aad u kordhiso waxqabadkeeda.
Xusuusnow inay tahay marawaxadda ay tahay inay hawada ku riixdo sanduuqa iyo in fiilada ama fiilada ay ku sii jiraan banaanka. Intaa ka dib, waxay ka sameeyeen dhawr god oo kale wejiyada dhinaca sanduuqa. Way ku habboon tahay in la sameeyo godadkan qaybta ka soo horjeedda godka marawaxadda. Godadkaasi waa inay ahaadaan cabirka tubooyinka si ay si qumman ula jaanqaadi karaan.
Marawaxadda iyo tuubooyinka waa in lagu dhejiyaa saldhigyadooda. Intaas ka dib, waxaan u adeegsannaa cajaladda dahaadhka si aan ugu daboolno isgoyska u dhexeeya marawaxadda iyo tuubooyinka godadka ay ka kooban yihiin. Sidan oo kale, waxaan hubineynaa in sanduuqa uusan u oggolaanaynin wax hawo ah inay ku dhacdo jeelalka godadka. Kaliya waxay hawada ka saareysaa jeexitaanka tuubbooyinka.
Markaan gaarnay tallaabadan, waxaan si ficil ah u heli doonnaa nidaamkayaga qaboojiyaha gurigeenna oo diyaar u ah inuu bilaabmo. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad ku rido boorso baraf ah sanduuqa gudihiisa. Waxaa lagugula talinayaa inaadan sanduuqa aad u gaarin maxaa yeelay haddii bacaha badan ee barafka mararka qaarkood saameyn ku yeelan karaan hawada hawada iyo awoodeeda. Waxaan kordhin karnaa awooda qaboojiyaha gurigeena adigoo sanduuqa saaraya dherer cayiman si hawo loogu qeybiyo guriga intiisa kale. Waan ognahay in hawo qabow ay u janjeerto inay soo degto maxaa yeelay way ka cufan tahay. Tan macnaheedu waxa weeye, haddii aan dhigno qaboojiyaha gurigeenna qaybta sare ee guriga, hawadu si fiican ayaa loogu qaybin doonaa qolka intiisa kale.
Tani waa habka ugu xirfada badan uguna hufan ee loo sameeyo qaboojiye guri waxayna noqotay mid caan ku ah dhamaan dadka doonaya inay lacagtooda ku keydsadaan oo ay yareeyaan wasakheynta deegaanka. Waxaa fiican inaad tijaabiso noocan ah qaboojiyaha guryaha ka hor intaadan xagaaga kulul gelin. Dabcan, maahan sida kaliya ee loo sameeyo aaladda noocan ah, laakiin waxaa jira kuwo kale oo aad u tiro yar.
Mid ka mid ah noocyada kala duwan ee suurtagalka ah in laga dhigo qaboojiye guri ayaa ah wareeg kasta. Aan aragno waxyaabaha loo baahan yahay:
Mitir iyo badh tuubo naxaas ah
Laba mitir oo tuubo caag ah
Baaldi guf ama qaboojiye
Biyo iyo baraf
Waa inaanu dhignaa tuubada naxaasta ah dhabarka marawaxada iyo maadaama hawadu halkan ka nuugayso. Waxaan u kala qaadnay tuubada balaastigga ah labo oo waxaan ku xireynaa tuubbo tuubada tuubbada naxaasta ah. Midkood ayaa ku xiran bamka aquarium-ka kan kalena waxaa la dhigayaa salka baaldiga.
Waxaan baaldi ka buuxineynaa biyo iyo baraf waxaana ku xirnaa bamka iyo marawaxadaha. Daqiiqado gudahood hawada ka soo baxda marawaxadu aad ayey u qabownaan doontaa.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan sida loo sameeyo qaboojiye guri.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Dib u warshadaynta » Qaboojiyaha guriga
Astaamaha iyo noocyada guryaha bey'ada